यी हुन् विश्वका अचम्मका जागिर, जहाँ कर्मचारी निर्वस्त्र हुनुपर्छ ! पढ्नुहोस्::Nepal's Online News Portal
यी हुन् विश्वका अचम्मका जागिर, जहाँ कर्मचारी निर्वस्त्र हुनुपर्छ ! पढ्नुहोस्
असोज,१९/ एउटा पुरानो भनाइ छ– कमाउ अनि खाउ। अहिलेको जमानालाई हेर्दा यो भनाइ निकै सटिक लाग्छ। किनभने दुई छाक रोटी खान कमाउन आवश्यक छ। यही कारण यो पापी पेटलाई खुशी राख्न मानिसहरु कस्तो कस्तो काम गरेर पैसा कमाउँछन्। उनीहरुको उद्देश्यले जसरी पनि पैसा कामएर पेट पाल्ने हुन्छ।
आज हामी तपाइँहरुलाई विश्वका यस्ता जागिरका विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं, जुन कुरा थाहा पाएर तपाइँ छक्क पर्नुहुन्छ। आज हामीले जानकारी दिने काम गर्न सबै कपडा उतार्नु पर्छ। सुन्दा अचम्म लागेपनि यो सत्य हो।
यस्ता कामको पहिलो नम्बरमा आउँछ टपलेस हाउसमेड। अमेरिकासहित केही युरोपेली सहरमा आजको समयमा टपलेस हाउसमेडको माग धेरै हुने गरेको छ। यी ठाउँमा घरमा काम गर्नकालागि यस्ता हाउसमेड हायर गरिन्छ। जो कपडा उतारेर काम गर्न तयार हुन्छन्। यी ठाउँमा यो एक व्यापार जस्तै हुन थालेको छ।
बेलायतको राजधानी लन्डनमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ, जहाँ प्रवेश गर्न ग्राहले पहिला आफ्नो कपडा उतार्नुपर्छ। रेस्टुरेन्टमा आउने ग्राहक अवाला यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि पूरै निर्वस्त्र हुन्छन्। अमेरिकाको राजधानी वाशिंटनमा पनि एउटा यस्तो कफी शप छ, जहाँ कर्मचारी अर्धनग्न भएर काम गर्छन्।
बेलायतकै सहरमध्ये एक चेल्सीमा एउटा योगा स्टुडियो छ। यो स्टुडियो आफैंमा खास छ। किनभने यहाँ योगा सिक्ने र सिकाउने सबै निर्वस्त्र हुन्छन्। यी बाहेक अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका केही ठाउँमा बागबानीकालागि यस्ता पुरुषलाइ रिक्रुट गरिन्छ जो निर्वस्त्र रुपमा काम गर्न तयार हुन्छन्